WARBIXIN: Xaqiiqooyinkii Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Xalay Ee Siddeed Dhamaadka Champions Leaque-ga, Kylian Mbappé Oo Taariikh Cusub Dhigay Iyo Faah Faahinta Xogtan. - Laacib.net
WARBIXIN: Xaqiiqooyinkii Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Xalay Ee Siddeed Dhamaadka Champions Leaque-ga, Kylian Mbappé Oo Taariikh Cusub Dhigay Iyo Faah Faahinta Xogtan.
Afar kooxood oo kaliya ayaa hadda ka soo gadhay 32 kii kooxood ee xili ciyaareedkan u ordayay koobka Champions leaque-ga iyada oo afar ka mid ah siddeedii kooxood ee isku soo hadhay ay xalay iyo habeen hore hadheen. Kooxaha Real Madrid, Juventus, Ateltico Madrid iyo AS Monaco ayaa ah afarta kooxood ee wali haysta fursada ay koobkan ugu guulaysan karaan.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa xog laga ururiyay kulamadii ay xalay ee ay wada ciyaareen kooxaha Juventus, Barcelona, Monaco iyo Dortmund, waxaana xaqiiqooyinkan ka mid ah kuwo khaas ah oo aan hore loo gaadhin.
1- Goolhayaha halyayga ah ee Gigi Buffon oo markale Barcelona shabiqiisa ka ilaashaday ayaa kulankiisii 46 aad ee Champions Leaque-ga garoonka kala baxay shabaqa nadiif ah waxaana ka horeeya kaliya Iker Casillas (54), Edwin van der Sar (50) & Petr Cech (47).
2-Lionel Messi ayaa kulankii Juventus shan darbo la seegay bartilmaameedka goolka waana markii labaad ee uu sameeyay darbooyinkii ugu badnaa oo aanu bartilmaameedkooda la helin kaliya waxaa ka horeeyay kulankii BATE borisov ee September 211 markaas oo 6 darbo goolka la seegay.
3- Goolkii uu dhaliyay xidiga AS Monaco ee Valère Germain ayay ku qaadatay in uu 22 ilbidhiqsi ku dhaliyay markii uu ciyaarta soo galay waana goolkii ugu deg dega badnaa ee uu xili ciyaareedkan dhaliyay ciyaartoy garoonka badal ku soo galay.
4- Xidiga Dortmund ee Marco Reus oo gool ka dhaliyay Monaco ayaa ku lug lahaa 15 gool oo Champions Leaque-ga ah 13 kii kulan ee ugu danbeeyay waana 11 gool oo uu dhaliyay iyo 4 gool caawineed oo uu sameeyay.
5- Radamel Falcao ayaa goolal ka dhaliyay 22 kooxood oo ka mid ah 24 kii kooxood ee uu kaga horyimid tartamada UEFA oo kala ah Champions Leaque-ga iyo UEFA Super Cupka, waxaana ka baxsaday laba kooxood oo kaliya.
6- Da’yarka layaabka dhigaya ee Kylian Mbappé ayaa noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee afartiisa kulan ee ugu horeeyay Champions Leaque-ga dhamaantoodba goolal soo dhaliyay tan iyo Diego Costa oo isna rekoodhkan sameeyay sanadkii 2014 kii.
7- Markale Kylian Mbappé ayaa taariikh cusub u dhigay wareegyada finalada Champions Leaque-ga kadib markii uu noqday ciyaartoygii abid ugu horeeyay goolal ka soo dhaliyay afartiisa kulan ee ugu horeeyay wareegyada 16 kooxood iyo siddeed dhamaadka Champoions Leaque-ga.
8- Borussia Dortmund ayaa taariikh cusub u dhigtay Champions Leaque-ga iyada oo noqotay kooxdii abid ugu horaysay ee ay Champions Leaque-ga goolal uga dhaliyeen ciyaartoydii ugu badnayd oo ah 15 ciyaartoy oo kala duwan. Marco Reus ayaa noqday ciyaartoygii 15 aad ee Dortmund ah oo xili ciyaareedkan goolal ka soo dhaliyay UCL.
9- Markale Borussia Dortmund ayaa rekoodh kale oo fiican ka abuurtay Champions Leaque-ga waxayna noqotay kooxdii ugu horaysay ee celcelis ahaan hal xili ciyaareed ka soo dhalisay goolsha ugu badan iyada oo 9 kulan ku soo dhalisay 27 gool.
10- Radamel Falcao ayaa Champions Leaque-ga kaga socda heer gool dhalineed oo layaableh isaga oo 50 kulan oo uu saftay ku soo dhaliyay 45 gool.
11- Juventus ayaa xili ciyaareedkan ah kooxda ugu difaaca fiican Champions Leaque-ga waxaana 10 kulan looga soo dhaliyay kaliya 2 gool, mana jirto koox tiro sidan u yar oo goolal ah laga dhaliyay.